Agorapulse: Inbox tsotra sy miray amin'ny fitantanana media sosialy | Martech Zone
Folo taona lasa izay, tao amin'ny World Media Marketing World, dia nihaona tamina olona tsara fanahy sy manam-pahaizana Emeric Ernoult - mpanorina sy CEO an'ny Agorapulse. Be olona ny tsenan'ny fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy. Marina aloha. Nefa i Agorapulse dia mandray ny media sosialy satria mila izany ny orinasa… dingana iray.
Mihasarotra hatrany ny misafidy ny fitaovana (na fitaovana) mety ho an'ny filantsika. Ho an'ny olona rehetra (toa ahy) manandrana mitantana kaonty marobe izay mikorontana sy mitabataba amin'ny SPAM sy ny fivarotana varotra, Agorapulse dia mamaky ny tabataba. Mba haharatsy kokoa azy io, ireo mpivarotra fitaovana dia manova ny maodelim-bidin'izy ireo sy ny maodelin'ny vidiny matetika, mazàna mampiakatra ny vidiny na miakatra amin'ny serivisy tena mora ka hatramin'ny taha ambony amin'ny orinasa.
Agorapulse dia fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy izay inoako fa mahitsy. Ity no antony ampiasako azy isan'andro ary atoro azy amin'ny mpanjifa tsirairay…
Tsy hisy korontana Inbox intsony. Isaky ny miditra aho dia mahita mazava ny boatin-kaonty tsirairay miaraka amin'ny famantarana ny isan'ny entana miandry ahy hijerena.
Rehefa nifindra tany Agorapulse izahay ary nahazo teboka iray fa nanana boaty famoahana hafatra izay naka hafatra mivantana dia nahazo ny fihainoana izany, ary afaka namoaka ny doka tao amin'ny toerana iray ihany izahay, afaka nampiasa azy io tahaka ny hampiasainay inbox hafa ao amin'ny rafitry ny tapakilanay.
Inbox sosialy natambatra natao hamonjy fotoana
Agorapulse dia nandrafitra ny Inbox Social Unified hanampy anao hahatratra ny Inbox Zero haingana sy mora. Ny hafatra, hevitra ary firesahana vaovao rehetra, ho an'ny Facebook, Twitter, ary Instagram, dia aseho amin'ny alalàn'ny a handinika sivana mba hanampiana anao hifantoka amin'ny entana farany nataonao ary hijanona ao izy ireo mandra-pandinihanao ny tsirairay amin'izy ireo na hamerenanao ny tsindry iray amin'ny bokotra iray. Ny resadresakao rehetra dia tafiditra amin'ny toerana iray ahafahanao mandrindra, mitantana, manendry ary manome anarana ny resaka rehetra amin'ny fikambanananao.
Influencers - Jereo ny anaran'ny mpandefa sy ny mombamomba azy isaky ny voatanisa. Manampia marika mety hanasokajiana ireo mpampiasao sy naoty anatiny hanomezanao ny teny manodidina ny ekipanao.
Fanehoan-kevitra momba ny doka Facebook sy Instagram - Ampifanaraho daholo ny hevitra momba ny doka nataonao. Raiso ny statistika raha vantany vao tadiavinao araka ny filaharany.
Fitaovana boaty - Sivana inbox, valiny voatahiry, hetsika maro, fandikan-teny iray-tsindry, fanendrena ekipa — alao izy rehetra, na inona na inona drafitra fidinao
Atombohy ny kaonty Agorapulse maimaim-poana
Famoahana haino aman-jery sosialy intuitive
Agorapulse dia mamela ny ekipanao hanatsara, hiara-miasa ary handamina ny lahatsoratry ny haino aman-jery sosialy handamina, hanaiky ary hamoaka lahatsoratra ahafahan'izy ireo mahazo ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny tambajotra sosialy tsirairay.
Fiaraha-miasa amin'ny ekipa - Mizarà fanamarihana, manara-maso ireo hetsika, ary jereo hoe iza no mifampiresaka — amin'ny fotoana tena izy.
Kalandrie nozaraina - Afaka manaiky, mandà, na manome valin-teny momba ny lahatsoratra tsirairay ny mpampiasa. Ianao sy ny mpanjifanao dia afaka mijery ihany koa ny atiny voalahatra, navoaka, nankatoavina, ary nolavina.
Filaharana famoahana haino aman-jery sosialys - Mamorona sokajy filaharana handahatra lahatsoratra misy atiny sy fampielezan-kevitra mifandraika amin'izany. Hamarino tsara fa manana fandanjalanjana atiny lehibe ianao mandritra ny herinandro, indray mipy maso.
Fanaraha-maso ny media sosialy
Mihainoa amin'ny resadresaka ifanaovana amin'ny haino aman-jery sosialy momba ny marikao, ny fifaninanana ary ny habakao. Valio haingana ireo fiovam-po maika.
Filter - Mifantoha amin'ny zava-dehibe miaraka amin'ny masontsivana fikarohana YouTube sy Twitter. Atsofohy amin'ny antsipirihany amin'ny alàlan'ny mpandraharaha boolean hahazoana izay tianao indrindra.
Organize - Mariho ny paikadin'ny votoatinao amin'ny alàlan'ny fanamarihana marika amin'ny entana, toy ny lahatsoratra manandanja, ny hetsiky ny mpifaninana ary ny hevitry ny mpanjifa mba hahazoana retrieval mora sy valiny.
Discover - Mijanona eo an-tampon'ny mpanjifa, ny vinavina ary ny mety ho trangan'ny orinasa vaovao - tsy misy fetra.
Fepetra sy tatitra momba ny haino aman-jery sosialy
Fantaro izay atiny milamina indrindra, aiza, ary oviana. Araho ny fironana sy ny zava-bitan'ny ekipanao ary mahazoa tolo-kevitra momba ny hetsika votoatin'ny sosialy manaraka miaraka amin'ny angon-drakitra fitondrantenan'ny mpampiasa.
Focus - Jereo ny tratra organika, ny karama azo, ny tratra totaliny, ny tsindry ary ny isan'ny mpampiasa mirotsaka amin'ny atiny.
mahita - Jereo hoe firy ny mpanaraka azonao na very, isaky ny jerena ny atiny, ary ny fifandraisana amin'ny atiny.
ohatra - Araho mora foana ny fotoana famaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mba hahazoana antoka fa voakarakara haingana ny resadresaka marika rehetra. Araho ny valiny sy ny hevitra naverina, nafenina ary voafafa.
Tatitra momba ny herinaratra - Mamorona tatitra manokana arakaraka ny refy sy ny laharan'ny daty izay nofidinao, manerana ireo mombamomba anao. Azonao atao koa ny mampitaha ny fe-potoana ary mametraka ny tatitra mandeha ho azy amin'ny mailakao.
Ity karazana data ity dia manamora ny fampisehoana ny asan'ny olona mitantana ny kaonty tsirairay. Fanampiny lehibe ho an'ny masoivoho na mpitantana vondron'olona mahaleo tena.
Sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy ho an'ny masoivoho
Raiso ny fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy farany-in-one ofisialy - sarany ho an'ny ekipa mitombo.
tatitra - Mamorona sy mizara mora foana ny topy maso sy ny antsitrika lalina ao anaty atiny sosialy, firosoana ary fitomboan'ny mpanjifanao. Mahazoa safidy an-taonany maro.
Fankatoavana atiny - Manolora doka fankatoavana mampino. Mampiasà kalandrie iray ho an'ny piraofilina sosialy betsaka araka izay avelan'ny drafitrao atao. Rehefa manampy mpanjifa ianao dia afaka manampy kalandrie.
andraikitra - Admin, tonian-dahatsoratra, mpanelanelana, vahinin'olona - manome andraikitra ny mpanjifa sy ny mpiasa vaovao. Samy miovaova ny andraikiny tsirairay amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra, valiny ary tatitra.
Fampiharana finday fitantanana haino aman-jery sosialy
Zava-dehibe ny fananako rindranasa finday hitantanana ny kaontiko media sosialy an-dalana, ary ny fampiharana finday Agorapulse no tena ilaiko! Azoko atao ny mitantana ny famoahana rehetra ahy tsotra sy mora avy amin'ny Inbox Social app!
Disclosure: Izaho dia samy mpampiasa mazoto, mpankafy ary mpiara-miasa amiko Agorapulse! Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: sehatra media sosialy masoivohoagorapulsebufferemeric ernoultFacebookfifaninanana facebookmpifaninana pejy facebookfifaninanana amin'ny fizotry ny facebookInstagramLinkedInfizotry ny fankatoavana ny media sosialyfizotry ny votoatin'ny media sosialyfitantanana media sosialyfitantanana media sosialy ho an'ny masoivohotontolon'ny varotra sosialyfanaraha-maso ny media sosialytatitra momba ny media sosialystatistikan'ny media sosialyTwitter
Malina: Ahoana ny fomba hitarihana mitarika B2B bebe kokoa miaraka amin'ny Navigator an'ny varotra LinkedIn
Aug 6, 2015 amin'ny 11: 33 AM
Nanandrana ilay demo aho ary diso fanantenana tamin'ireto manaraka ireto:
1. Tsy mahay mandahatra lahatsoratra reoccurring.
2. Tsy mahay mamonjy volavolan-dahatsoratra
3. Hisintona amin'ireo lahatsoratra teo aloha ary ampiasao indray.
Efa niresaka tamin'ny olona iray tao Agorapulse ve ianao momba ny fanavaozana ny "fitaovam-panontana"? Miezaka mamantatra raha te-hihazona na tsia isika. Misy sarintany misy endri-javatra izay hitanao ve any ho any?
Aug 7, 2015 amin'ny 10: 24 AM
Salama Jp. # 1 tsy tokony hampiharina mihitsy satria fanitsakitsahana ny fananana ara-tsosialy. Ny Twitter, Facebook ary LinkedIn dia tsy mamela ny fanavaozam-baovao miverimberina. # 2 dia fiasa mahaliana ary toa hevitra tsara. # 3 mety ho olana amin'ny # 1 ihany koa. Handefa ny fifandraisako ao amin'ny Agorapulse ity kofehy ity haneho hevitra momba izany.
Aug 7, 2015 amin'ny 10: 44 AM
Hey Jp, hevitra tsara! Misaotra anao nanokana fotoana hamaliana an'i Doug 🙂
Raha ny marina Jp, marina ny anao, misy fiasa lehibe tsy hita ao amin'ny fitaovanay famoahana. Ny vaovao tsara dia: nanomboka niasa tamin'izy ireo isika 2 volana lasa izay ary tonga izy ireo, mety hanomboka ny volana septambra:
- Filaharana ho an'ny kaonty tsirairay, ahafahanao milahatra ny atiny mitovy imbetsaka (raha maitso mandavantaona, mazava ho azy, raha tsy izany, inona no dikany 😉
- Fijerena kalandrie ho an'ny mpampiasa (tian'ny mpampiasa anay izany fomba fijeriny ny atiny izany).
Ny, kelikely ato aoriana, hampianay ny famoahana kaonty marobe (avoaka amin'ny kaonty rehetra na severakl indray mandeha). Avy eo, hanampy ny LinkedIn izahay, avy eo ny Instagram, avy eo angamba ny G + (mbola manontany tena momba an'io).
Noho izany, ilaina ny miandry iray volana hafa, indrindra satria hanavao ny fampiharana finday isika mandritra io vanim-potoana io (fandefasana any amin'ny fivarotana app anio aorian'ny taona fampandrosoana 🙂